Raadinta Wicitaanada Taleefoonada ee Raadinta Noolaha iyo Lacag bixinta | Martech Zone
Khamiis, Juun 8, 2017 Arbacada, Juun 7, 2017 Douglas Karr
Waxaan leenahay macmiil jecel inuu waxbadan wado wicitaanada telefoonka ganacsigooda marka loo eego qaab kasta oo kale. Macaamiil ahaan, waxaan dooneynaa inaan hubinno in istiraatiijiyadeena ay si fiican u shaqeynayaan, marka waxaan u baahannahay inaan ku darno xeelado gaar ah si aan u fahamno halka ay taleefannadu ka imaanayaan.
Macmiilku wuu is daray Lambarada martigeliyey ololeyaashii hore iyo, ka dib markii aan daqiiqado ku qaadanay barxadda waxaan ognahay inay dabooli karto baahiyaheena!
Raadinta Wicitaanada Taleefoonka Lacag Bixinta
Raadinta wicitaanada taleefan raadinta lacag bixintu waa sahlan tahay maadaama aad daabici karto lambar kasta oo taleefan aad rabto. Kudar lambar taleefan oo ay kujiraan HostedNumbers adiguna diyaar ayaad u tahay inaad tagto… mise adigu? Gudaha HostedNumbers, waxay bixiyaan wicitaan adag Analytics si aan kuu ogeysiiyo halka wicitaanada soo galaya ay ka imaanayaan.
HostedNumbers waxay kaloo bixisaa is-dhexgalka Google Analytics oo aad u wanaagsan. Kaliya tag Adeegyada> Xulashada Qaabdhismeedka waadna heli doontaa Isdhaxgalka Falanqaynta Webka.
gudahood ah Isdhaxgalka Falanqaynta Webka, Waxaan awoodnay inaanu sameysano URL firfircoon bog aan ka xanibnay matoorada raadinta inay gurguurtaan. Awooddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad isticmaasho xargaha firfircoon ee la beddeli karo sidaa darteed waxaan dhisnay URL olole ah oo qabanaya isha sida raadinta, dhexdhexaadka wicitaan, ka dibna ololaha sida lambarka taleefanka loo wacay.
Hadda waxaan awood u yeelan doonnaa inaan raad-raacno wicitaannada taleefanka raadinta ee ku jira Google Analytics. Sidoo kale, waxay u badan tahay inaan raadinta beddelid dejin u sameyno boggan gaarka ah ee gudaha iyo laga yaabee dashboard kormeera wicitaannada.
Raadinta Wicitaanada Taleefoonka Baadhitaanka Dabiiciga ah
Isticmaalka HostedNumbers, waxaan ku dari karnaa lambar taleefan raadinta dabiici ah ka dibna waxaan kula socon karnaa Google Analytics iyadoo la adeegsanayo lambarka kor ku xusan. Si kastaba ha noqotee, raadinta raadinta dabiicigu way ka yara dhib badan tahay sababta oo ah waxaan u baahanahay inaan otomaatiga u beddelno lambarrada taleefannada haddii isticmaalaha uu ka soo galo goobta mashiinka raadinta.
Si tan loo sameeyo, tan waxaan ku samaynay daabacaadda lambarka taleefanka ee iskuxira on site dhex tags taako taako leh fasal gaar ah:
Hada Naga Soo wac: (19876543210) 987-654
Iyo gudaha bogga hoostiisa intaan la gaarin dhamaadka jirka, waxaan xamuulnaa jQuery kaas oo tilmaamaya tixraaca ka dibna wax ka beddelaya lambarka taleefanka haddii uu yahay mashiin raadinta diraya taraafikada:
Hadda, haddii qof ka socda raadinta dabiiciga uu ku dhajiyo natiijada oo uu yimaado bog kasta oo ka mid ah goobta, lambarka taleefanka ololaha ayaa la soo bandhigi doonaa. Marka booqdaha waco lambarka taleefankaas, Google Analytics ayaa ku qaban doona olole gudahood!
Tags: Analyticsraad raadinAnalytics googletiro badanraadinta wicitaanka taleefankaraadinta wicitaanada
Si fiican ayaa loo qabtay!